I-china Wooden super bass USB bluetooth 2.0CH stereo audio sound Hi-Fi hifi bookshelf speaker (BT-106) Ukukhiqiza nefektri | Eyin
Isipikha se-Hi-Fi hifi bookhelf sesikhulumi (BT-106)
Ukunikezwa Kwamandla: AC110V ~ 240V 50-60Hz
Iyunithi Lokushayela: 4 ″ x2 + 1 ″ x2
Amandla wokukhipha: 60W
Imvamisa Impendulo: 60Hz ~ 20KHz
Usayizi womkhiqizo: W160xD220xH275MM
Umsebenzi: I-Bluetooth / AUX IN / Optical / AUX OUT / USB
• 1XAUX INPUT - Ukuxhuma okulula kunoma iyiphi idivaysi enokukhishwa kwehedfoni okungu-3.5mm noma okukhipha i-RCA okubili.
• Uhlobo lwe-Bluetooth- Kulula ukuxhuma idivayisi nge-Bluetooth ukujabulela umculo omnandi.
• Umculo wokufaka we-USB ngedivayisi ye-USB.
• IKHWALITHI LOMSINDO WESITUDIYO - Ukukhiqizwa kabusha kwemisindo yemvelo kusuka ku-13mm kasilika dome tweeter no-4 inch full range unit.
• I-CLASSIC WOOD FINISH - Ikhwalithi ephezulu ye-MDF yokwakha eqediwe ngomphumela wokhuni i-vinyl isebenza njengokuncoma okuhle kunoma yikuphi ukuhlobisa kwasekhaya.
Izipikha zeshelufu zamandla ze-BT-106 zihlanganise ukubukeka kwe-retro nomqondo wanamuhla wekhwalithi yomsindo. Uma ufuna izikhulumi zeshelufu ezingabizi futhi ezingabizi kakhulu ezinomsindo ongashintshi izipikha ze-BT-106 zamashalofu wuhlelo lwakho lwesipikha sokuya ku-2.0. Ifaka umshayeli webhasi we-4-intshi kanye ne-calibrated, evulekile ye-bass reflex port, lolu hlelo lwesipikha se-shelf yamabhuku lunikeza amanothi we-bass aqinile, acebile agcwele ubukhona nokujula. Ukukhiqizwa komsindo nokwethembeka kwe-BT-106 yinoma yimaphi amaphupho ama-audiophiles. Amakhasimende amaningi e-Edifier asebenzisa izipikha zethu zamashalofu ezinamandla ze-BT-106 ukuxhuma ama-turntable awo ukuthola isipiliyoni esihle kakhulu somsindo. Jabulela i-vinyl yakho yakudala ngenkathi ujabulela intuthuko kubuchwepheshe besimanje bomsindo.
Yenza ngokwezifiso isipiliyoni sakho sokulalela ngama-bass, treble kanye nokudayela kwevolumu kusipika esisebenza eshalofini lamabhuku. Umsindo wekhwalithi okhiqizwayo wenza lezi zikhulumi zamashelufu ezincwadi ziletha i-midrange echumayo ngqo ejabulisa noma imuphi umbuyekezi. Isilawuli kude esisebenza kahle esihlanganisiwe sifakiwe. Ungaguqula ivolumu bese usetha izipikha ukuba zithule lapho zidingeka ngaphandle kokufinyelela kuzipikha; amandla nokuphelela kutholakale kalula. I-Edifier R1280T iza nolawulo lwethoni eyakhelwe eceleni eceleni kwesipika esisebenzayo. Ngokuya ngokuncamelayo, ungenza ukulungiswa okuncane kwe-treble ne-bass kusuka ku -6 kuye ku- + 6 db. Ukulawulwa kwevolumu yedijithali kusethelwa ngokuzenzakalela kuzinga elinethezekile ngaso sonke isikhathi lapho izipikha zivulelwa amandla.
Okokufaka oku-Dual RCA
Izipikha ze-BT-106 ezinikwe amandla eshalofini zikuvumela ukuthi uxhume kumadivayisi amaningi womsindo usebenzisa okokufaka okubili kwe-RCA. Ngokubheka iphaneli elingemuva ungasho kalula ukuthi enye yalezi yisipikha esingenzi lutho kanti esinye yisipikha esisebenzayo. Isipikha esisebenzayo sinezinto ezimbili ezifakiwe ezingemuva. Lokhu kokufaka kuphelele ku-RCA kuya ku-RCA noma ku-RCA ekuxhumaneni kwe-AUX. Xhuma kwi-PC, i-laptop, ithebhulethi, ifoni noma isidlali sokuqopha. Izipikha zixhunywe komunye nomunye ngocingo lwesipikha olujwayelekile. Izinhlobonhlobo zezintambo ezifakiwe ziqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu ajabulela umculo wawo kusuka kumadivayisi amaningi ngaphandle kwebhokisi.
Langaphambilini Ibha yomsindo wesikrini sekhwalithi ephezulu ye-MAXX BASS ene-2.4G wireless subwoofer (SP-602 ene-subwoofer)
Olandelayo: Isipikha se-TV esezingeni eliphakeme se-PC 2.0 USB, Isipikha se-Soundbar Bluetooth (SP-600B)
Ibha yomsindo ye-Bluetooth Inentambo Futhi Ingenantambo
Isipikha esingenantambo se-Bluetooth
Factory Inani ezimibalabala RGB Izipikha-Bluetooth W ...
Umklamo ohlukile we-Multi-function mini bar ...
ODM akhiqize hifi izipikha ukhuni yokwenziwa Hom ...
I-Wifi Soundbar YeTv, Ibha yomsindo yeKaraoke, Izikhulumi ze-Wifi Soundbar, Tv Futhi Soundbar Mount, Ibha yomsindo ye-Alexa, Amabha Womsindo we-Tv,